Otu esi etinye Desktọpụ MATE na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Wednesday, October 27, 2021 Wednesday, October 13, 2021 by Jọshụa James
Wụnye desktọọpụ MATE
Lelee mbụ & na-enyocha Desktop MATE
Maka ndị na-amaghị Gburugburu Desktọpụ MATE, ọ bụ ihe na-aga n'ihu nke GNOME 2. A ma ama maka ịdị arọ, ngwa ngwa, na kwụsie ike nke na-arụ ọrụ na Linux na ọtụtụ BSD sistemụ arụmọrụ. MATE bụkwa nhọrọ magburu onwe ya maka sistemụ dị ala ma ọ bụ ndị na-achọ ịnọgide na-arụ ọrụ nke ọma na akụrụngwa sistemụ. Ọzọkwa, mbipụta Ubuntu MATE raara onwe ya nye dị maka gburugburu desktọpụ a, nke nwere ike ịrata ndị ọrụ ka ha gbanwee na Ubuntu kpamkpam.
Mbipụta Desktọpụ MATE nke Ubuntu bụ ama ama maka ịdị arọ, ngwa ngwa na kwụsie ike, ọrụ obodo na-akwalite, yana nnukwu nhọrọ maka ngwaahịa Gnome nke Ubuntu. Na ngwụcha nkuzi, ị ga-amụta Otu esi etinye Ubuntu MATE na sistemụ Ubuntu 20.04 gị.
Site na ndabara, MATE na-abịa na ebe nchekwa Ubuntu niile, nke a na-eme ka nrụnye dị mfe.
Iji tinye MATE, mepee ọnụ ọnụ gị wee pịnye iwu a:
Mara, na-eji (Ctrl+ALT+T) na keyboard gị ga-emepe ihe atụ n'otu ntabi anya na Ubuntu.
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ka ịga n'ihu na ntinye nke Ubuntu MATE.
Nrụnye ahụ nwere ọtụtụ ngwugwu iji budata na wụnye, nke mere na oge ga-adịgasị iche na ngwaike sistemu na karịsịa njikọ ịntanetị.
N'oge echichi, ị ga-ahụ ndị na-esonụ ozugbo window.
Dị ka mmepụta n'elu kwuru, ozi a na-agwa gị maka onye njikwa ngosi ịhọrọ. Maka Ubuntu MATE, nke a ga-abụ "lightdm". Pịa "TAB" igodo ịhọrọ ma pịa gị "Tinye igodo" aga n'ihu.
Ozugbo ịmaliteghachi usoro Ubuntu gị, ị ga-ebu ụzọ bịa na ihuenyo nbanye ọhụrụ nke dị nnọọ iche na isiokwu mara mma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Abanyela ozugbo. Nke mbụ, ịkwesịrị ịgbanwe ọnọdụ desktọpụ. Emere nke a site na ịpị bọtịnụ nhazi dị n'akụkụ aka nri elu nke mpio nbanye, n'aka nri nke gị aha njirimara, na ịhọrọ "NWỤNWA" kama "Ubuntu (nke ndabara)".
Dị ka mmepụta dị n'elu gosiri, ị tinyela MATE 1.24.0 nke ọma na Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala nke ọma ka esi etinye MATE Desktop Environment na Ubuntu 20.04. N'ozuzu, MATE bụ nnukwu ọrụ obodo maka ndị na-achọ nkwụsi ike na ọ dị mma maka ndị chọrọ ihe kachasị na desktọpụ ha, laptọọpụ, na netbook ma na-ahọrọ ihe atụ desktọọpụ omenala.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara iji gburugburu desktọpụ MATE, gaa na ntuziaka akwụkwọ ntuziaka.
Categories Ubuntu Tags Gburugburu Desktọpụ MATE, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Tọzdee, Ọktoba 14, 2021 7:27 nke abalị
Kedu ihe kpatara na ọ bụghị naanị tinye Ubuntu Mate, ekpomeekpo gọọmentị ma ọ bụ Ubuntu. Mbipụta obodo, nke na-enweghị ọtụtụ njiri mara Ubuntu? Enweghị nsogbu na ngwa ndabara n'ụzọ ahụ kwa!
Wenezdee, Disemba 15, 2021 8:22 nke abalị
Wenezdee, Disemba 15, 2021 9:11 nke abalị
Ọ dị mma, Ubuntu Mate Community Edition ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya.
Agbanyeghị ụfọdụ nwere ike họrọ ịwụnye ọtụtụ gburugburu desktọpụ, m ga-eme ntuziaka nrụnye raara onwe ya nye na Ubuntu Mate n'oge na-adịghị anya.